देशलाई कम्युनिष्टको शासनबाट मुक्त गराउनुर्छ: शेरबहादुर देउवा (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
देशलाई कम्युनिष्टको शासनबाट मुक्त गराउनुर्छ: शेरबहादुर देउवा (भिडियो सहित)
काठमाडौं, मंसिर २६ गते । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई कम्युनिष्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई कम्युनिष्टको शासनबाट मुक्त गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जनताले डर र त्रास मात्रै सहनुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भोलिको दिनमा कम्युनिष्टको सरकार आउन नदिन आफूलाई सभापति बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले कम्युनिष्टले कुनै पनि हालतमा सत्ता कब्ज गरिरहन्छु भनेकोले काँग्रेस नभइ प्रजातन्त्र नबच्ने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीको अधिवेशन निष्पक्ष हुने भन्दै सभापतिमा जितेपछि प्रत्येक चुनावलाई निष्पक्ष गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको सभापतिमा जितेपछि काँग्रेसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा सहज जित दिलाउने र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘देशमा कम्युनिष्टको शासन आयो भने के हुन्छ ? कम्युनिष्टको शासन आयो भने अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हुन्छ । प्रजातन्त्र पद्धतिमा हिँडेको छु भनेपनि कम्युनिष्मा कुनै सिद्धान्त छैन । हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकारमा कस्तो अवस्था थियो । कस्तो डर, त्रास थियो ? भोलि यस्तै किसिमको शासन आउँछ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा कम्युनिष्टको शासनबाट मुक्त गराउनु छ । खास गरी ओलीको शासनबाट मुक्त गराउनु छ । कम्युनिष्टले कुनै पनि हालतमा सत्ता कब्जा गरिछोड्ने धेरै ठूलो प्रयास छ । उनीहरुले बोलेका पनि छन् । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रवादी हो । हामीले कुनै किसिमको गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नु हुँदैन । हाम्रो अधिवेशन निष्पक्ष छ । यो अधिवेशनबाट फेरि म पार्टी सभापति भएको खण्डमा प्रत्येक चुनावहरु निष्पक्ष गराउनेछु । नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याएर केन्द्रको सरकारमा, प्रदेशको सरकारमा, स्थानीय तहको सरकारमा, नेपाली काँग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेछु ।’